I-Brazing carbide iye ensimbi - umkhiqizi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
I-Brazing carbide ensimbi
Ibhande le-Carbide-Steel ne-Induction
Inhloso: Nikeza isisombululo kulolu hlelo lokusebenza lwe-steel-carbide isibambo Izinto • Umzimba 10mm; i-carbide tip 57 x 35 x 3 mm • I-Braze shim • I-Braze i-white shex
Ukushisa: 750 ° C (1382ºF)
Ukuvama: 150 kHz
Izinsiza ze-DW-UHF-20KW uhlelo lokushisa lokungeniswa, olufakwe isiteshi sokushisa esikude esiqukethe (2) ama-1.0 μF capacitors (wenani eliphelele le-0.5 μF) Ikhoyili yokufudumeza yokungenisa eyi-4.5 ″ helical eyenzelwe futhi yathuthukiswa ngqo yalolu hlelo lokusebenza.
Inqubo: I-shim yomzimba kanye ne-carbide ihlanzwa futhi ibhaqe ukuhamba njengokusetshenziswa kuwo wonke umhlangano. Izingxenye zifakwa ndawonye ku-coil yokungeniswa. Ama-tubes amabili e-ceramic abekwa ukuthi i-coil iphikisana ukuze ibambe izingxenye ngesikhathi sokushisa. Ukufudumala kwezingxenye kuvunyelwe ukuma ngaphambi kokushisa. Amandla okushisa asetshenzisiwe asetshenzisiwe kuze kube yilapho ubhontshisi begeleza.
• Ukushisa okuhlosiwe kokuhlanganiswa kwesibindi kuyasebenza
• Inqubo engenasici iqondakali kahle, ilawulwa
• imiphumela yenziwe kabusha
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi ibhande le-carbide steel, I-Brazing carbide ensimbi, Ibhande le-Carbide-Steel ne-Induction, I-Induction ye-Induction Brazing Carbide, Uhlelo lwe-RF Brazing
Ukubhabhisa I-Carbide Ukwenza Insimbi Ngokukhipha
Inhloso: Imihlangano yefayela ye-Braze carbide rotary enezingqinamba ezifanelwe kwisicelo se-aerospace
• I-carbide ingenalutho
• Isivinini esisheshayo se-shank
• Ukushisa okubonisa ukudweba
• I-Braze shim ne-black flux
I-Frequency 252 kHz
Imishini yokushisa ye-DW-UHF-10kw, ifakwe esiteshini sokushisa esikude esinezikhwama ezimbili ze-0.33 μF (inani eliphelele le-0.66 μF) I-coil yokufakelwa kwe-induction eyenzelwe futhi ithuthukiswe ngqo kulolu hlelo lokusebenza.
Inqubo Kusetshenziswa ikhoyili yama-helical amaningi. Ingxenye iyashiswa ukucacisa isikhathi esidingekayo ukufinyelela izinga lokushisa olifunayo kanye nephethini yokushisa edingekayo. Kuthatha cishe amasekhondi angama-30 - 45 ukufika ku-1400 ° F (760 ° C) ngokuya ngosayizi wengxenye ehlukahlukene. I-flux isetshenziswa kuyo yonke ingxenye. I-braze shim ibekwe phakathi kwesimbi yensimbi ne-carbide. Amandla wokushisa we-induction asetshenziswa kuze kugeleze isibopho. Ngokuthwebula okulungile, ukugxila kwengxenye kungatholakala.
Imiphumela / Izinzuzo • Ukuphindaphindiwe, okushisa okuphelele.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi ukukhishwa kwe-carbide, ibhande le-carbide steel, I-Brazing carbide ensimbi, ukufakwa kwesibhakabhakede se-carbide, I-RF ibhadla i-carbide